THERMOFLASK VS. HYDRO FLASK - YEYIPHI ENGCONO? - IZIXHOBO
Thermoflask vs. Hydro Flask - Yeyiphi engcono?
Xa kuziwa ekukhetheni izixhobo ezifanelekileyo zohambo lwangaphandle olunamagingxi-gingxi, umzila wokuhamba intaba ngobusuku bonke, okanye nohambo lwendlela ngempelaveki, ukuba nebhotile yamanzi enokuphinda isebenze ngokuqinisekileyo yeyona nto ibalulekileyo.
Iibhotile zamanzi ezenziwe ngokwezifiso kunye neeflasks zale ndoda yanamhlanje kufuneka ibe yinto ephambili yokuthenga, kokubini ukubonelela ngezixhobo zobuqu kunye nokukhuthaza ulwazi ngendalo esingqongileyo. Ixhomekeke ku I-23% yokupakishwa kwebhotile yamanzi iphelela kwindawo yokulahla inkunkuma minyaka le, yongeza ubunzima kwingxaki yokugcwaliswa komhlaba. Ngabom okanye hayi, ukuba nebhotile enokuphinda isebenze kunceda ukunciphisa lo mbandela kalishumi.
Ukukhethwa kwendalo ngebhotile yamanzi njengemo yeebhotile ezinokuphinda zisetyenziselwe ukuxhasa amashishini awukhathaleleyo kakhulu umhlaba wethu, ngelixa ikwabonelela ngokufumaneka kwesiselo esilawulwa liqondo lobushushu naphina apho uya khona.
I-Thermoflask kunye ne-Hydro Flask ziinkampani ezimbini ezinjalo, nganye nganye inikezela ngeebhotile ezikhethekileyo nezenziwe ngokwezifiso ngokupheleleyo kulwelo olushushu nolubandayo. Ilungele abakhenkethi, abahambi, amadoda angaphandle, nangaphezulu, iiflask ezivaliweyo ezitywiniweyo lutyalomali olukrelekrele kulo naluphi na uhlobo lokuzonwabisa.
Zeziphi iibhotile zamanzi eziValiweyo eziVuthayo?
Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, iibhotile zamanzi ashushu kunye neebhotile zokugquma zizinto ezimbini ezahlukeneyo.
isiqingatha sobuso isiqingatha se tattoo yentyatyambo
Itekhnoloji yokugquma i-vacuum ixhasa ukumiselwa kobushushu besiselo ngokuthintela ulwelo ekudluliseni ubushushu okanye ukubanda ngeendlela ezintathu: Ngemitha, ngokuhambisa, okanye ngokuhambisa.
thixo ngaphezu kwayo yonke enye itattoo
Okokuqala, isilivere okanye isinyithi esingenanto esingenasiphelo kwisahlulo esingaphakathi seflask susa ukubakho kwamaqondo obushushu aphuma ebhotileni aze abaleke ulwelo.
Okwesibini, indawo engenanto okanye inkunkuma phakathi kweendonga eziphindwe kabini zeflask kunciphisa ukubakho kobushushu obuhamba ngokudibana.
Okokugqibela, umaleko obhityileyo owenza igumbi elingaphakathi lebhotile ligcina zombini ulwelo olushushu nolubandayo ekubalekeni ngokuqhutywa, luqiniswe ngumphandle wangaphandle owongeza ubushushu ngakumbi ebhotileni.
Uyilo lwebhotile yamanzi olutshintshayo ayisiyiyo itekhnoloji entsha. Ngapha koko, isazinzulu saseScotland uSir James Dewar wenza uhlobo lwayo lokuqala ngo-1892. Ngoku ngaphezulu kwenkulungwane kamva kwaye iyafumaneka kwihlabathi liphela, iinkampani ezinje ngeThermoflask kunye neHydro Flask ziye zayifezekisa le bhotile igqunyiweyo, yongeza intuthuko kunye nezibonelelo.
Ngelixa ukubonakala kwangaphandle kwezi bhotile zamanzi kungafani ngokwahlukileyo, amanqaku angaphakathi eThermoflask kunye neHydro Flask container afane kakhulu.
Umshini technology yokugquma
18/8 umgangatho ukutya steel stainless ngaphandle
Uyilo olubiyelwe ngodonga kabini ukunqanda ukubila
Igcina ubushushu butywala bulawulwa: ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-24 kwiziselo ezibandayo kunye neeyure ezili-12 kushushu
Inika iwaranti emiselweyo yobomi kwiiflasks
Ii-18, 24, 40, nama-64 ii-ounce zobukhulu
Sebenzisa itekhnoloji yeTempShield eneendonga eziphindwe kabini (ukufakwa kwe-vacuum)
Ukuthambisa iziselo ukuya kwiiyure ezingama-24 kuyabanda kunye neeyure ezi-6 kushushu
I-18/8 yentsimbi engenasici (ukumelana ne-rust kunye ne-shatterproof)
Ukudalwa kweebhotile zesiko ngenkqubo ye-MyHydro
Izixhobo ezizodwa ezikhethiweyo
Ubungakanani beebhotile ukusuka kwi-12 ukuya kwi-64 yeeyunun
Iindidi ezinkulu zoyilo loyilo, kubandakanya ezinye ngakumbi ezenzelwe abantwana
Zombini ezi bhotile zamanzi zinomsebenzi ofanayo, kodwa zifezekise iziphumo ezahlukileyo ezimangalisayo.
I-Thermoflask: Ukudala isiqhwithi esifanelekileyo
Ukufezekisa ukunyuka kokuthandwa ekuqaleni kweminyaka elishumi, iimveliso zeThermoflask zezinye zezona zandi zivakalayo kwaye zifunwa kakhulu emva kweebhotile zamanzi kwintengiso namhlanje.
ukakayi kunye neetattoos zomnqwazi ophezulu
Imidlalo nganye yeThermoflask intsimbi engaphandle engenazingcingo edityaniswe neendlela ezininzi zokusela. Iintengiso zeephakeji zibandakanya izixhobo ezakhelweyo ngaphakathi zokucoca, ukugcina kunye nokugcina ibhotile.
Phantse zonke iimodeli zeThermoflask ziza nesiphatho esifanelekileyo, esinokuba luncedo kakhulu kubantu abakhetha ukuphatha okanye ukucofa iibhotile zabo ngelixa besendleleni. Ukubhabha okunganyangekiyo ukubila kuqinisekisa ukuba iziselo zakho ezibandayo zihlala zibanda kangangeeyure ezingama-24, ngelixa iziselo zakho ezishushu zihlala zitshisa nge-12.
Iibhotile zeThermoflask ziza kwiqela elinemibala eliqingqiweyo, kunye nezinye zezona zidumileyo:
Ipeyinti ikhuselekile kumzimba weflask usebenzisa isincamathelisi esinamandla, okuthetha ukuba ukulahla ibhotile yakho yamanzi kwindlela ayizukukrwela okanye ukuchuba umbala ngaphandle kokuba ukubetha bekunyanzelekile.
Elinye lawona manqaku athengiswa kakhulu kwiThermoflask luyilo lwendalo olupheleleyo, oko kuthetha ukuba nasiphi na isiciko esisandula ukuthengwa siyakwazi ukulingana nakweyiphi na ibhotile yamanzi. Imilomo ye-Chug kunye neencopho zomququ ezakhelweyo ziyafumaneka kwiinyanda ezikhethiweyo kwi-Intanethi. Ngaphezulu, ezi zivalo zinobungqina obuvuzayo kwaye azinavumba, oko kuthetha ukuba iziselo zakho aziyi kungcamla okomgubo weplastiki okanye ukuchitheka ngempazamo kwiibhutsi zakho ezintsha ezintle.
Thenga iThermoflask kwiAmazon
I-Hydro Flask: Ixesha leDrastic lifowunela iibhotile eziDlakadlaka
ukuzola umvambo engalweni
Ukusekwa ngaphakathi kwisakhiwo esincinci e-Bend, e-Oregon, i-Hydro Flask ibikhokela ukukhangela iimveliso zokugquma eziphezulu ukusukela oko yasekwa ngo-2009.
Njenge-Thermoflasks, i-Hydro Flask yenziwe nge-18/8 yentsimbi engenasici, i-BPA yasimahla, kwaye iza nohlobo olukhethekileyo lwetekhnoloji yokugquma ye-vacuum egcina ubushushu bokusebenza kwazo zonke iziselo. Nangona kunjalo, ixesha le-Hydro Flask yokufudumeza ubushushu sisiqingatha seThermoflask, kuphela isambathisa iiyure ezingama-6 ngokuchasene neeyure ezili-12 zeThermoflask.
Ukuba ipeyinti yebhotile yeThermoflask yomelele, idyasi yomgubo yeHydro Flask yomelele ngakumbi. Yongeza ukubambelela okungaphezulu kunye nokukhuselwa kokubila, le nto yenziwe ngobunjineli ngohambo olude kunye nokunyuka engqondweni. Ipeyinti yomelele kakhulu kwaye yakhelwe nakwezona ntaba zibukhali, kubandakanya imibala ye-14 efana:
Ngokwewebhusayithi esemthethweni yeHydro Flask, inani lemibala, ezineziciko, ubukhulu bomzimba, kunye neebhotile zebhotile ezinikezelwayo zinokudala ngaphezulu kwendibaniselwano eyahlukileyo ye-183,456. Iinjongo zakho-kunye nobuchule bakho-ziyakhuthazwa ukuba zibaleke.
Thenga iFlask Hydro kwiAmazon
Yeyiphi ebhetele-iThermoflask Okanye i-Hydro Flask?
Xa kufikwa ekusebenzeni, zombini iibhotile zeHydro kunye neebhotile zeThermoflask ziyakwazi ukugcina ulwelo olubandayo kubushushu obulungileyo beeyure ezingama-24. Nangona kunjalo, iibhotile zeThermoflask ziyakwazi ukugcina ulwelo olushushu kwiiyure ezili-12, xa kuthelekiswa nomda weeyure ezi-6 zeHydro Flask.
Ngaphezulu, ukhetho lokwenza ngokwezifiso luthintelwe ngakumbi kwiThermoflasks, kwanokubambezeleka okuncinci. Iziciko ze-Universal ngokuqinisekileyo ziluncedo, kodwa xa ujongene neenketho ezingenamkhawulo ezinokuzenzekelayo ezikhoyo kwiNkqubo yeHydro Flask's MyHydro, ziyaphaphatheka xa zithelekiswa.
Ekugqibeleni, isigqibo sokuba loluphi uhlobo lwebhotile yamanzi etywiniweyo ebhetele engcono ubukhulu becala ixhomekeke kwiimfuno zakho. Abo bafuna ibhotile enokhetho oluninzi lokwenza ngokwezifiso kunye nezimbo zesimbozo banokukhetha ukujonga okucwangcisiweyo kweHydro Flask. Ngaba ufuna ukugcina ukusela kwakho kushushu? I-Thermoflask yeeyure ezili-12 zokufaka ixesha eligqibeleleyo lilungele nantoni na oyifunayo.
Utshintsho kumgangatho wokhuni ukuya kwithayile
Nokuba yeyiphi na iflask okhetha ukuyityala, qiniseka ukuba ibhotile yakho elawulwayo enobushushu isebenza iimfuno zakho zombini kunye nendlela ophila ngayo ngeendlela ezilungileyo.
Thelekisa amaxabiso kuzo zombini ezi zinto zingezantsi:
Jonga amaxabiso akutshanje eThermoflask kwiAmazon
Jonga amaxabiso akutshanje eHydro Flask kwiAmazon
Ukuthunyelwa kwitottoo yebhotile
tattoo yomkhono weentyatyambo omnyama nomhlophe
Yintoni ekufuneka uyiphephe emva kokufumana itattoo
izimvo zam zetattoo yeqhawe
I tattoo yomthi wosapho enamagama kumasebe